“Izaho, Nisitraka Ny Rafitra Fetran’isa isam-poko Fahiny” : Fijoroana Vavolombelon’ilay Breziliana Tovovavy Mahantra, Mainty Ary Feno Fahasahiana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Yannis Arnoux
Voadika ny 30 Septambra 2014 19:06 GMT
Vakio amin'ny teny polski, English, عربي, Français, Español, Português
Fonom-bokin'ny tatitra mikasika ny taona voalohany tamin'ny fandaharanasa Afroatiude, sary nataon'i Alexsandro de Brito Almeida. Nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Eo amin'ny faha-27 taonany, Gabriela Moura dia tovovavy Breziliana efa afaka miteny sahady fa nahatafita ny fiainany. Avy any amin'ny faritra ambanivohitra ary nianatra tamin'ny sekolim-bahoaka tany avaratr'i Parana, nozohiany hatrany ny nofinofiny nomeny anarana hoe “fahasahiana iray tena goavana” : hiditra any amin'ny Sekoly Ambony Momba ny Fifandraisan'ny Samy Olona ao amin'ny Anjerimanontolon'i Londrina. Tsy nofinofy mora tanterahana izany ao Brezila, firenena iray izay tsy fahazàrana ho an'ireo zanaky ny mpanjaitra, mpanampy an-trano na mpiambina zazakely, toa azy ny “manonofy ankoatry ny fahavitàna ny kilasy farany amin'ny ambaratonga faharoa.
Ao anaty lahatsoratra mikasika azy manokana sy mampihetsi-po, tantarainy ny làlana nodiaviny mba hahazoana ny bakalaoreà, teo amin'ny faha-17 taonany, ary ny fomba niatrehany ireo hevitra raiki-tampisaka sy ny fanavakavahana tamin'ny nanekena azy ho mpianatra tao amin'ny anjerimanontolo tamin'ny alàlan'ilay rafitra fetran'isa isam-poko efa mipetraka any amin'ireo toeram-pianarana ambony. Resahan'i Gabriela ihany koa ny fotoana voalohany nifampikasohany tamin'ny kolontsaina mainty, izay nanova mandrakizay ny fiainany – ary, manomboka eo, manova ny fiainan'ireo tanora mainty rehetra mifanojo amin'ny làlany.
Gabriela Moura, 7 martsa 2014. Famoahana nahazoana alàlana.
Ity ny ampahany sasany amin'ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ilay tovovavy bilaogera, izay misarika ny saina ho any amin'ny tontolon'ny bilaogy Breziliana. Atomboka amin'ny fanomànany ny bakalaoreà tamin'ny fampianaran-tena.
Teo amin'ny faha-16, nanapa-kevitra ny hanova ny fandaharam-potoanako aho tany an-tsekoly, niala tamin'ny maraina nivadika ho amin'ny hariva, mba hananako fotoana misimisy kokoa hiasàna sy handoavako ny fianarana fanampiny hanomanana ny bakalaoreà. Ary io dia efa fahasahiana lehibe sahady : hetaheta hiditra any amin'ny anjerimanontolon'i Londrina. Tsy navelan'ny reniko hanaraka io drafitro io aho, tamin'ny nilazàny fa mety ho sarotra ny hampivady ny asa sy ny fianarana, ary mety ho kely na tsy hisy intsony mihitsy ny fotoana malalaka ho ahy mba hialàko voly sy hanaovako ny fanaon'ny tanora. Noho izany no nahatonga ahy nanomboka ny fianarana tao an-trano, niainga tamin'ny boky fampiasa any an-tsekoly fotsiny – ny aterineto mbola haitraitra tsy takatry ny saina tamin'izany. Raha ny marina, tsy nanana akory aho na solosaina aza, ary tsy mbola nanan-kevitra akory hoe rahoviana no hanana iray amin'izany. Mpanjaitra miasa tena no asa nataon'i reniko.
Momba ny fahombiazana tamin'ny bakalaoreà sy ny hevitra raiki-tampisaka tany amin'ny anjerimanontolo :
Mba hanafohezana ity ampahany amin'ny tantara ity : ny febroary 2005, nandeha namonjy lanonana nokarakarain'ny fampielezampeo tao an-tanàna aho, izay nanambara mivantana ny valin'ny fanadinana bakalaoreà, ary rehefa nilaza ny valiny ry zareo (fangatahan'ilay kolejy tsy miankina lehibe indrindra ao an-tanàna, hehy), tao ny anarako, ary, mazava loatra, nitomany ny reniko rehefa naharay ny vaovao tamin'ny telefaona, tamin'ny finday nindramiko taminà namana iray.
Tokony ho tsara ny zavatra rehetra raha tsy nisy ny indro kelin'ny mpandrafitra : mpisitraka ny rafitra fetran'isa isam-poko aho. Tahaka ireny hoe milanja sorabaventy misy jiro mipipika ireny aho teo ampitenenana hoe tsy isan'ny mponin'ity toerana ity. Hatrany am-boalohany, henoko ireo fanamarihana mandranitra nataon'ireo olona miteny tsy miafina fa tsy tokony ho ao aho, araka ny hevitr'izy ireny, noho ireto antony manaraka ireto :
– Nianatra mafy izy ireo, nandany 2, 3, 4 taona nanarahana ireo fampianarana faran'izay lafo tao an-tanàna, mazava loatra fa mba hananany vintana misimisy kokoa.
– ny vokatra ratsy mety ho avy amiko dia hampitarazoka ny kilasy manontolo.
– fanavakavahana ny fotsy amin'ny endrika mitsimbadika io.
– Mahatonga fiforonana olona kamo.
Mikasika ny zavatra iainan'ny tovovavy mahantra, mpianatra ary misitraka ny fetran'isa isam-poko :
Momba ny resaka fanavakavahana amin'ny endrika mitsimbadika, natao toy ny tsy nahare na inona na inona, mba tsy hankarary ny saintsika. Ary raha misisika ry zareo, lesona iray manazava ny fanaovana vono moka ny vahoaka mainty dia tokony ho ampy. Raha tsy izany, dia satria manana toetra ratsy marina mihitsy ilay mihaino anao. Ary mahatonga fisalasalana iray hipongatra koa izany : olona iray nianatra nandritry ny efatra taona tany aminà sekoly tsy miankina ary miampanga mpianatra iray misitraka ny fetran'isa ara-poko ho nangalatra ny toerany ? Tsy manaraka ny lojika izany. Saingy mbola nànana ny lanjany ny vola.
Tonga kosa izao ny ampahany vaovao amin'ny tantarako.
Momba ilay lazaina ho “fihenjihenjen” ireo mpisitraka ny fetran'isa ara-poko : azo heverina ho ny fiampangàna hafahafa indrindra ao anatin'ity ranomasimben'ny kaondrana mpanavakavaka ity. Tsy ny lafo indrindra akory ny taranjam-pampianarana ny Fifandraisana Samy Olona. Mitentina eo amin'ny 40 Reais eo ireo boky nilaina. Ny niavaka dia ireo boky momba ny toekarena sy ny haivarotra izay mihoatra ny 100 Reais. Nefa ny habetsahan'ireo dika mitovy tsy maintsy natao dia nanomboka nikiky ny kaontiko tany amin'ny banky izay efa tsy nananako intsony. Ary, tamin'ny andro sasany, tsy maintsy nisafidy aho na handoa tapakilam-pitaterana nisanda 3 reais na hampiasa ireo 3 reais ireo hividianana hanina. Tao anatin'ny tontolon'ny anjerimanontolo, indraindray, mitovy lenta ny zava-bita. Tsy nahatsaro loatra ho meloka aho nitaha tamin'ireo namako avy any amin'ny sekoly tsy miankina.
Momba ny ‘Afro-attitude’, tetikasa iray nampiray ireo mpianatra mpisitraka ny fetran'isa ara-poko avy aminà anjerimanontolom-panjakana niisa 10:
Niaraka tamin'io tetikasa io dia nifampikasoka tamin'ny kolontsain'ny mainty aho, izay tsy fantatro tany aloha, nampiasaiko nividianako ny solosaina voalohany teo amin'ny fiainako ny volan'ny vatsim-pianarako, nianarako ny zavatra mamparefo ny vahoaka mainty ary izany dia ampy ho fanoitra nahatonga ahy amin'izay misy ahy ankehitriny. Notohanan'ny Sekretariàn'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Governemanta Federaly, nanam-bintana nianatra ny momba ny dindo sy ny tsy fahampiana any amin'ireo vahoaka mainty tany amin'ny faritra niainanay izahay, ary dia vitanay nony farany ny nandrakitra ny asa rehetra sisa tavela hotanterahana. Tsy haiko na ho vitako ny tsy hitanila amin'io teboka io ary hanazava tsara ny lanjan'io tetikasa io eo amin'ny fiainako. Ndeha hataontsika hoe nahazo tamin'ny lalaon'ny kisendrasendra ny faharanitan-tsaiko. Fahalalana manana amby ampy. Mifanindran-dàlana amin'izany, tiako notakarina ny antony nisisihan'ireo namana sasany tamin'ny hoe tsy nisy ilàna anay sy ireo namako hafa nisitraka ny fetran'isa isam-poko, ary ny antony tsy tokony haha-eo anay.
Ny fanolorana diplaoma sy ny vokatra :
Vitako tamin'ny 2008 ny fianarako, saingy tsy nisy sariko navoaka amin'ny afisin'ilay lanoanana, toy ireo namako, satria tsy nahaloa vidim-pidirana tamin'ilay lanonana izahay. Tonga tany aho noho ny fanasàna natolotry ny tovovavy namako iray. Tao anaty fankahalàna lanonana fanolorana diplaoma no nianatra aho, ary nahatsiaro ho nipatitaka.
Fa ny tsy maintsy ambara, dia eny, mandaitra ny fetran'isa isam-poko. Ary manelingelina ihany koa. Manelingelina izy ireny satria porofoiny fa tsy mitondra mankaiza intsony ny bakalaoreà, sy satria manova ny tontolo iray izay tokam-bolo, hatramin'ny 10 taona lasa izay. Fotsy. Porofoin'ny fetran'isa isam-poko fa fomba filaza noforonina fotsiny ny hoe ‘sangany ara-pahalalàna’ mba hanakiviana sy hampitahorana ireo tsy manam-bola be holaniana any amin'ireo sekoly izay toa mivarotra ny sariny fotsiny fa tsy ny fahaizana amam-pahalalàna. Na mba hampanalavirana ireny olona ireny amin'ny sekolim-bahoaka, satria, ny tiana hahatongavana, nahoana no hiasa saina amin'izay sekolin'ny zanakavavin'ny mpanampy an-trano raha toa ny anao afaka hianatra any anaty lapa soa ao afovoan-tanàna?
Ary taorian'ny fanolorana ny diplaoma :
Voaray hiasa ho mpisahana ny Fifandraisann'ny Samy Olona aho, 24 taona aho, mpitantana orinasa ao amin'izay iasàko. Tsy ratsy an.
Niverina nanohy fianarana aho ny 2010, fa tamin'ity indray mandeha ity dia hianatra hamaky, hanoratra ary hiteny ny fiteny Arabo maoderina sy ny Arabo klasika. Nianatra momba ny sarimihetsika, ny literatiora, ny filaozofia ary ny tantara Arabo.
Momba ny rafitra fetran'isa isam-poko :
Mora takarina ny rafitra fetran'isa isam-poko natao ho an'ireo mainty. Natao ho an'ny fidiran'ireo olona mainty any amin'ny anjerimanontolo izy io. Tsy nisolo toerana ny filàna mamerina mandinika ny fanabezana fototra izy, saingy manakana ny tsy hitomboan'ny tsy fitoviana ara-poko eo amin'ny firenena. Tsy zavatra hafa ankoatry ny rafitra miara-mirona ny rafitra fetran'isa isam-poko. Fa koa, maivana loatra raha ho antsoina hoe “famindram-pon'ny governemanta”, satria ny iray amin'ireo adidy aman'andraikitry ny governemanta dia ny mitady izay hahasambatra ny olom-pireneny, ary ireo mpisitraka ny rafitra fetran'isa isam-poko dia mampiasa zo iray, dia ny fahafahana mianatra. Ny hadisoana dia ny fieritreretana hoe, satria ireny olona ireny tsy manana 1500 reais isam-bolana mandritry ny 15 taona, dia tsy mendrika ny hiditra amin'ny varavaramben'ny fianarana ambony. Manelingelina ilay rafitra fetran'isa isam-poko satria asehony fa afaka mividy zavatra hafa ny vola, olona mihitsy aza angamba, fa tsy mahavidy ny maha-olona.
Aza dinganina ny fitantaràna manontolo ao amin'ny bilaogy Gabinóica etc.
Ny rafitra fetran'isa isam-poko dia manokana toerana any amin'ireo toeram-pianarana an'ny fanjakana na tsy miankina ho an'ireo vondrom-poko voafaritra manokana, toy ny mainty sy ireo “autochtones” (olona teratany na efa niaina ela teo amin'ilay faritra), toy ny endrika hetsika fanamafisana mba hampitsimbadihana ny resaka fanavakavahana ara-tantara tao Brezila natao tamin'ireo vondrom-poko vitsivitsy. Ao Brezila, nanomboka tamin'ny 2009 ny fanekena ny rafitra fetran'isa isam-poko any amin'ny anjerimanontolo, nanamafy io rafitra io ny Tribonaly Federaly Faratampony tamin'ny 2012.
sary hosodoko an'i Gabriela Moura, famoahana nahazoana alàlana.